Tanora Mpamorona Avy Ao Puntland, Somalia: Mamorona Ny Fiaran’ny Fanantenana. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2016 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Aymara, Català, English
Teraka tao amin'ny faritr'i Buuhoodle ao Puntland, faritra iray mizaka tena ao anatin'i Somalia i Gulled Adan Abdi, 13 taona.
Na teo aza ny fahasarotam-piainana, nisoro hatrany i Gulled sy ny fianakaviany, manambatra kilalao fiaramanidina, fiara fitondra miady ary fitsofàna rivotra i Gulled, amin'ny fampiasàny ireo kojakoja fanolo sy izay azo tsimponina amin'ny vatoaratra fampiasa amin'ny fiara.
Tsy toy ny any andrefana ao Somaliland, tsy mitady ny fahaleovantena tanteraka hihataka amin'i Somalia i Puntland. Tamin'ny fanambaràny ny fizakany tena tamin'ny 1998, efa imbetsaka ireo mpitarika ilay faritra no nilaza ny hetahetan'izy ireo ny hisian'ny Somalia Federaly.
Tantaran'ny Somaliland farany